Turkiga oo xirxiraya qalabkii ugu ballaarnaa ee fogaan arag ah & ujeedka ka dambeeya + Sawirro | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Turkiga oo xirxiraya qalabkii ugu ballaarnaa ee fogaan arag ah & ujeedka...
Turkiga oo xirxiraya qalabkii ugu ballaarnaa ee fogaan arag ah & ujeedka ka dambeeya + Sawirro
(Erzurum) 18 Okt 2021 – Turkiga ayaa ku dhow dhamaystirka rakibaadda fogaan arag ku shaqeeya aaladda infrared, oo laga samaynayo gobolka Erzurum oo lagu wado inuu howlgalo oo cirka eego 2022-ka.
Mashruucan oo ay wadaan Eastern Anatolia Observatory (DAG) ayaa qayb ka ah aragtida Turkiga ee 2023-ka, waxaana cilmi ahaan maalgelinaysa Atatürk University ayaa wuxuu Turkiga siin doonaa fogaan araggii dalkaa ugu ballaarnaa taariikhda iyadoo ay ballarka kaamiradiisu tahay 4 mitir (13 cagood), iyadoo arki karta wax ka yar 3 micron oo yaalla meel aad u fog.
Fogaan aragga DAG, oo uu Talyaanigu sameeyey, ayaa waxaa Turkiga la keenay 26-kii Febraayo 2021, iyadoo ay jiidayaan 6 gaari oo waawayn oo ah kuwa 100-ka tan qaada, waxaana deeto loosoo qaaday figta sare ee buurta Konaklı Mountain, oo 3,170 mitir ka sarraysa gunta badda.
Previous article”Si uu meesha uga boxo go’aanka ICJ aan burburinno DF Somalia!” – Gobollada ay Kenyan-ku ku tashanayaan inay la ”safanayaan” (Daawo)
Next articleQIIMAYN: 20-kii heshiis ee suuqa kala iibsiga xagaagan ugu fiicnaa oo lasoo saaray